နောက်ဆုံးပေါ်အခမဲ့ Android ဂိမ်းများ - ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့အများဆုံးအသုံးပြုသောအရာများအနက်နောင်လာမည့်မျိုးဆက်သစ်စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ၏မွန်မြတ်မှုနှင့်မနာလိုစရာဘာမျှမရှိသောအရည်အသွေးမြင့် GPUS ပါသောသူတို့၏ပရိုဆက်ဆာမျိုးစုံနှင့်အတူ၏ကောင်းကျိုးများအတွက်။ ယနေ့အကောင်းဆုံးခရီးဆောင်ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်များ, အကြီးအပျော်မွေ့ရန်ဖြစ်ပါသည် ဂိမ်းအမျိုးမျိုး Android application store မှာပေးထားတယ် Play Store ကို o Google Play စ Google က။
ဒီမှာ Androidsis နောက်ဆုံးပေါ် Android ဂိမ်းထုတ်ဝေမှုများနှင့်ဘယ်သောအခါမျှမသေနိုင်သောရောင်းအားများနှင့်ဂန္ထဝင်များအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
၏ဤအပိုင်းကို၌တည်၏ Android ဂိမ်းများ တရား ၀ င်ဂူဂဲလ်စတိုးဆိုင်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအမျိုးမျိုးကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ Arcade နှင့်လှုပ်ရှားမှုဂိမ်းများ၊ Platforms, Adventures, Shooters, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွက်လက်ဂိမ်းကားမောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ထဲရှိကလေးငယ်များကို tained ည့်ခံကျွေးမွေးရန်အကောင်းဆုံးသောဂိမ်းများ။ Hay Day၊ Subway Surfers၊ Plants vs Zombies 2, Agar.io နှင့် Angry Birds ကဲ့သို့သောဒဏ္myာရီဆန်သောဂိမ်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်။
ဒီနေ့၏အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကုမ္ပဏီများသည်ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်သောအပိုင်း၌သင့်အတွက်စုရုံးခဲ့ကြသည် Android ဂိမ်းများ; Android အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည့်ထူးခြားသည့်အမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုနာမည်ကြီးသည့် Capcom, EA Mobile, Ubisoft, Gameloft, Cartoon Noetwork, Disney နှင့် Sega တို့တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Android ဂိမ်းများ
ဒါကြောင့်ယခုသင်သိ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင်ပြေစေခြင်းနှင့်ကအားလုံးကိုခံစားပါ Android အတွက်ကြီးမားတဲ့ဂိမ်းစာရင်း Androidsis မှာမင်းကိုမင်းတို့ကလုံးဝအခမဲ့ပေးပါတယ်
Android မှာအကောင်းဆုံး Harry Potter ဂိမ်းများ
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ပေါင်း .
Android အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ဂိမ်း ၂၅ ခု
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
ပိုကီမွန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသန်းနှင့်ချီသောကစားသမားများနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခု ...
PUBG Mobile update 1.5 သည်ယူလာသောသတင်းများ
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
PUBG Mobile အတွက်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ရှိပြီး၎င်းသည် ၁.၅ ဖြစ်သည်။ အပြောင်းအလဲ၊ သတင်းနှင့်တိုးတက်မှုအတော်များများပါလာသည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး ping pong ဂိမ်း ၆ ခု
Ping Pong သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးစားပွဲတင်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Among Us for Android အတွက်ဆင်တူသည့်ဂိမ်း ၅ မျိုး
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
သငျသညျဂိမ်းပြောင်းလဲပစ်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီထင်ပေမယ့်သင်, လူမှုရေးနှုတ်ယူခြင်းဂိမ်းများကိုကြိုက်လျှင် ...
Android အတွက်အကောင်းဆုံးမိန်းကလေးဂိမ်း ၆ မျိုး
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
နောက်တစ်ခုက Android အတွက်နောက်ထပ်စုစည်းမှုပို့စ်တစ်ခု။ ယခုတကြိမ်တွင်မိန်းကလေးများအလှည့်ဖြစ်သည်။
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ် .
ယနေ့ကလေးငယ်များအတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းတွင်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Android ဖုန်းများဖြစ်သည်။
သင်၏ Android မိုဘိုင်းမှပျောက်ဆုံးနိူင်သောဂိမ်း ၅ မျိုး
Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပြီးသောရေးသားပြုစုချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဆက်ဆံသည်။
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
Play Store တွင်ဖျော်ဖြေမှုနှင့်ကစားစရာအရှိဆုံးဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုမှာ ... ၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။
သင်surelyကန်အမှန်လျစ်လျူရှုထားသော PUBG မိုဘိုင်းအသစ်အသစ်၏လှည့်ကွက် ၅ ခု
Android အတွက်အကောင်းဆုံး multiplayer ဂိမ်းများ
Play Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအကောင်းဆုံးပေးဆောင်ရသောဂိမ်းများကိုရယူပါ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး PSP emulators
[APK] အကောင်းဆုံး NES emulator နှင့်ဒဏ္legာရီဂိမ်း ၇ ခု
Android အတွက် Nintendo DS emulators
Day R Survival၊ Android အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
အကောင်းဆုံး Pokemon Go Hoot မရှိဘဲ၊ Android Marshmallow အထူး
ဒစ္စနေး Crossy လမ်း၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောလျှို့ဝှက်စာလုံးများကိုသော့ဖွင့်နည်း